टोखालाई सम्पदाको नगर बनाउछौंं : प्रकाश अधिकारी |
टोखालाई सम्पदाको नगर बनाउछौंं : प्रकाश अधिकारी
प्रकाशित मिति :2017-05-10 09:39:43
२०४२ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा लागेका प्रकाश अधिकारी २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा नेकपा एमालेकोतर्फबाट तत्कालिन गोंगबु गाविसको उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । काठमाडौं जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ का क्षेत्रीय कमिटी अध्यक्ष रहेका अधिकारी यसपटक टोखा नगरपालिकामा एमालेको तर्फबाट मेयर पदका उम्मेदवार छन् । अधिकारीसँग टोखा नगरपालिकाको विकास र समृद्धि योजनाका विषयमा गरिएको कुराकानी :
जनताको घरदैलोमा हुनुहुन्छ । कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
करिब २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा जनताले लिएका छन् । त्यसमा पनि राष्ट्रियता, स्वाभिमान र संविधान कार्यान्वयनको सवालमा नेकपा एमालेले निर्वाह गरेको भूमिकाबाट जनता निकै उत्साहित भएको हामीले पाएका छौं । राष्ट्रियता जोगाउने र अबका दिनमा विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने पार्टी एमाले मात्रै हो भन्ने कुरा जनमानसले स्पष्ट रुपमा बुझेका छन् । टोखा नगरपालिकाका जनता अबको विकास र समृद्धिको नेतृत्व एमालेलाई सुम्पन तयार रहेको हामीले पाएका छौं । यो क्षेत्रको शसक्त, जनतामा परिचित र लोकप्रिय पार्टी पनि एमाले नै हो ।
तपाईंले निर्वाचन जितेपछि टोखा नगरपालिकामा कार्यन्वयन गर्ने मूख्य योजनाहरु के–के छन ?
टोखा नगरपालिकामा विशेष गरी खानेपानीको समस्या छ । त्यसका लागि हामीले स्रोेतको पहिचान पनि गरिसकेका छौ । जुनसुकै प्रयत्न गरेर भए पनि टोखा वासीलाई खानेपानीको समस्याबाट मुक्त गर्नेछौ । त्यस्तै, भूकम्पले क्षतविक्षत पारेका समुदायिक विद्यालयको पुननिर्माणमा ढिलाइ भएको छ । हामी यो कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने छौं । त्यत्ति मात्र होइन, यस क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको स्तर वृद्धि गरी निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धि बनाउने प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरेका छौं । २१औं शताब्दी सुहाउँदो शिक्षालयको व्यवस्था गर्नेछौं । टोखा नगरपालिका अत्यन्त सुन्दर, प्राकृतिक सम्पदाले धनी र सम्भावना नै सम्भावना बोकेको नगरपालिका हो । हामी टोखालाई सम्पदाको नगर बनाउने छौं । यस क्षेत्रको संस्कृृति र सभ्यता संरक्षण र सम्बद्र्धनमा जुट्नेछौं । टोखा नगरपालिकामा घना वस्तीको विकास भइरहेको छ । खेतीयोग्य जमिन लोपहँुदै गइरहेको छ । खेतीयोग्य जग्गामा आधुनिक खेती र कौसी खेतीलाई हामी प्रोत्साहन गर्नेछौं । ढल मिसिएका कारण बिष्णुमति खोला प्रदुषित छ । यसको व्यवस्थापन साथै खोलाको दुबै किनारमा करिडोर बनाएर वृक्षारोपण गर्नेछौं । स्वच्छ सफा सुन्दर हराभरा टोखा नगरपालिका बनाउने छौं । यहाँ भएका मठ मन्दिर र कलात्मक वस्तुहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा विशेष जोड दिनेछौं ।
‘हामी सबैको साथ ः सबैको विकास’ भन्ने मूल नाराका साथ अघि बढेका छौं । गोंगबु क्षेत्रलाई व्यापारिक, टोखालाई सांस्कृति पर्यटकीय क्षेत्र, धापासीलाई बौद्धिक क्षेत्र र झोरलाई कृषिको पकेट क्षेत्रको रुपमा अघि बढाउँछौं । यो हाम्रो मूख्य प्राथमिकताको काम हुनेछ ।
जनताले तपाईलाई नै भोट दिने आधारहरु के छन् ?
मैले २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा गोंगबु गाविसको उपाध्यक्ष निर्वाचित भएर यस क्षेत्रका जनताको सेवा गरेको छु । यस क्षेत्रका जनताको हरेक दुःख सुखमा सधै हातेमालो गरेर, प्रत्यक्ष सहभागी हुँदै आएको छु । यहाँका जनताको मूख्य समस्या र माग के–के छन भन्ने मलाई राम्ररी थाहा छ र ती समस्या समाधानको उपाय पनि हामीसँग छ । टोखा नगरपालिकालाई कसरी समुन्नत र समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विस्तृत योजना र भिजन मसँग छ । यो नगरलाई हामी भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँनेछौ । मतदाताले मेरो क्रियाशिलता र मैले अहिलेसम्म गरेको सेवाको मूल्याङ्कन गरेर मतदाताले मत दिनुहुनेछ भन्नेमा ढुक्क छु ।
निर्वाचनको परिणाम कस्तो आउने आँकलन गर्नुभएको छ ?
टोखा नगरपालिकाको सबै वडामा एमालेले स्पष्ट बहुमतका साथ जित्ने कुरामा हामी ढुक्क छौं । मतदाताले एमालेप्रति देखाएको सद्भाव र मायाको कारण एमालेको जित सुनिश्चित भइसकेको छ । टोखाको नगरपालिकाको विकास र समृद्धिको नेतृत्व एमालेले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने कुरामा मतदाता स्पष्ट भएको हामीले पाएका छौं ।
– दीपु पोखरेल